के तपाई पिडामा हुनुन्छ ? पीडामा हुनुन्छ भने यस्ताे गर्नुहाेस् | के तपाई पिडामा हुनुन्छ ? पीडामा हुनुन्छ भने यस्ताे गर्नुहाेस् – हिपमत
मेरो एउटा साथीको ब्रेक-अप भयो । केही दिन ऊ निकै तनावमा रह्यो कैयौँ प्रयास गर्दा पनि तनावबाट बाहिर निस्कन नसकेपछि उसले मलाइ सबै कुरा बतायो । त्यसपछि ऊ निकै बेर रोयो । जब सबैकुरा पोखेर आँशु बगायो, तब उसले हलुका महसुस गर्यो र केही दिनमा तनाव मुक्त भयो ।
दिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा शरीरलाई फाइदा पुग्छ ? यस्तो छ पकाउने तरिका